အဆိုပါဥပဒေ: သဘောတူညီခကျြအရက်အားဖြင့်မရှင်းလင်းထား | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဥပဒေ အလေ့အကျင့်အတွက်သဘောတူညီခကျြကဘာလဲ?
ညဉ့်ကိုအပေါ်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးလူငယ်များသောက်စရာဘို့နည်းနည်းပိုဆိုးဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ကဘာဖြစ်မည်နည်း အဆိုပါပြုခဲ့ဆင်းဖြစ်ကြပြီးသူတို့တစ်တွေနည်းနည်း Bond ချင်တဲ့အခါ, ဘယ်လိုဝေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသွားနိုင်မလဲ? ဘယ်အချိန်မှာ '' အဘယ်သူမျှမ '' ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး '' ကိုဆိုလိုသလဲ ဂိမ်းရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကဘာတွေလဲ? ဘယ်အချိန်မှာအချစ်ဇာတ်လမ်းလိင်မှဖွင့်ပါသလဲ? သူကားအဘယ်သူဆုံးဖြတ်?
သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲများတွင်အတန်းများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သောချမ်းသာကြွယ်ဝသောနောက်ခံမှနူးညံ့သောစိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ငါတို့သူ့ကို Jen လို့ခေါ်မယ်။ သူမသည်သူမအရက်နှင့် "သူမ၏ကန့်သတ်သိတယ်" ငါ့ကိုစိတ်ချပါ။ သူမဘာကိုဆိုလိုသနည်းဟုသူမမေးသောအခါသူက“ ငါဘယ်တော့မှအရမ်းမူးမသွားနိုင်တော့ဘူး၊ သူမသည်သို့သော်သူမအနေဖြင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များသို့မထွက်ခွာမီယောက်ျားလေးများနှင့်အကာအကွယ်မဲ့၊ သူမကမူးယစ်ဆေးမသောက်ပါကသူမနှင့်သူမဘယ်သောအခါမျှလိင်ဆက်ဆံလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဝန်ခံခဲ့သည်။ သူမမကြာခဏတောင်းဆိုသောကြမ်းတမ်းသောစအိုလိင်အပါအ ၀ င်လိင်အမျိုးအစားကိုသူမသဘောမတူခဲ့ပါ။ သို့တိုင်သူမအနေဖြင့်သောက်နေစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကြောင့်သူမအားထိုအခြေအနေများတွင်လိင်ဆက်ဆံရန် 'အားပေး' ခြင်းအတွက်သူအားပြစ်တင်ရှုတ်ချလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမစိတ်ထဲတွင်သူမကနောက်တစ်နေ့တွင်နောင်တရခဲ့လျှင်ပင်သူမသဘောတူခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဘီဘီစီကဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာခွင့်ပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကျယ်တဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်နှစ်ခုကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ မျဉ်းကိုဖြတ်ကူး နှင့် စည်းမျဉ်းများပြန်လည်ရေး။
အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး အတွက်အရက်နှင့် ပတ်သက်၍ 'မိမိ၏ကန့်သတ်ချက်ကိုသိခြင်း' သည်လွတ်လပ်စွာသဘောတူနိုင်စွမ်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကွဲပြားမှုသည်ဂျူရီလူကြီးများအတွက်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်းအတွက်ခွင့်ပြုချက်ပြproblemနာကိုပြproblemနာဖြစ်စေသည်။ ငါဟာ Jen ကိုဘာကြောင့်သူမကိုယ်ဝန်မသုံးတာလဲနဲ့ကိုယ် ၀ န်ဆောင်တာ၊ သူမတုန့်ပြန်သည်မှာသူမကလေးငယ်ကလိင်ဆက်ဆံနေသည်ကိုသူသိလျှင်သူမဒေါသထွက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်ရရှိပါကကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရုံသာမိခင်ကသူ့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုနမ်းခြင်းနှင့်နောက်ဇာတ်စင်ကိုစခြင်းစလုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူမ၏ပုဒ်များ၌ရပ်တန့်ခြင်းသည် "မယဉ်ကျေးသော" ဖြစ်သည်ဟုသူမထင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းမှာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့သူမရဲ့မိဘတွေကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းရွယ်တူချင်းဖိအားတွေဟာမယဉ်ကျေးတဲ့ကိစ္စလို့သတ်မှတ်ခံရပြီးညတွေမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းဟာသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်ထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ထိုသို့သောစွန့်စားရသောဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏အတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစအိုလိင်ဆက်ဆံဖို့ပြစ်မှုဖြစ်သော်လည်း, အမျိုးသမီးများမကြာခဏသူတို့ကသို့အတင်းအကျပ်နေကြသည်တိုင်ကြား။ သုတေသန စအိုနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ခိုင်မာသော 'သွေးဆောင်မှု' သည်အသက် ၁၆ မှ ၁၈ နှစ်ကြားလူငယ်များအကြားတွင်အများအားဖြင့်တွေ့ရသည် လူငယ်ယောက်ျားမိန်းမများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအဓိကလှုံ့ဆော်သူအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်“ အမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်နာကျင်” ကြောင်းသူတို့သိသော်လည်းလူငယ်များကအမျိုးသမီးများကို၎င်းတို့အားလုပ်ခွင့်ပြုရန်အတတ်နိုင်ဆုံးတွန်းအားပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ လူငယ်တွေတောင်မှသူတို့ကိုယ်တိုင်ပျော်မွေ့ပုံမရဘူး ဒါ 10 မိနစ်အသံအင်တာဗျူး ဦး ဆောင်သုတေသီနှင့်အတူ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များအကြောင်းပိုမိုရှင်းပြသည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး တည်းသာ၎င်းကိုခံစားရန်ဝန်ခံခဲ့သည်။ လူငယ်လူငယ်များအတွက်သူတို့၏“ အညိုရောင်အတောင်ပံများ” နှင့်သူတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ရမှတ်များရရှိခြင်းသည်သူတို့ရင်းနှီးသောသူနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းထက်ပိုအရေးကြီးသည်။
self-ထိန်းချုပ်မှုကြိမ်အကောင်းဆုံးမှာ, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်တို့တွင်ပါတီမြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်သတ်သတ်မှတ်ပေးရန်အစီအစဉ်တစ်ခုသတိရှိရှိကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ထားပြီးမဟုတ်လျှင်ကြောင့်ကျနော်တို့လိင်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ 'အေး' 'အဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့လိုတဲ့အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအမှတ်ပေးလျက်နှင့်အခါအားကြီးသောသှေးဆောငျတှနျးလှနျဖို့ခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်ခွင့်ပြုချက်ပေါ်နှင့်အကျပ်ကိုင်၏မျက်နှာ၌မှနျကွောငျးဝနျခံသောဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အရက်၏ဆိုးကျိုးကိုလှည့်ပတ်ထက်ပိုသောပညာရေးလိုအပ်ပေသည်။ '' ချိန်းတွေ့ကျွမ်းကျင်မှု 'နှင့်မည်ကဲ့သို့အခြားလူတစ်ဦး၏နယ်နိမိတ်ကိုလေးစားရဆုံးမဩဝါဒပေးကြီးမားတဲ့ကြိုတင်လိမ့်မည်။ လူငယ်များရဲ့သဘောထားတွေအတော်ကြာစစ်တမ်းများပညာရေး၏ဤအမျိုးအစားအဘို့အခေါ်ပြီ။
<< ဥပဒေ၏သဘောတူညီမှုသည်အဘယ်နည်း။ ဆက် >>